घर-आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई चिकित्सकका सुझाव
२१ बैशाख २०७८, मंगलवार ०७:४१
काठमाडौं – पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या हरेकदिन जसो बढिरहेको छ । संक्रमितहरु बढीरहँदा कतिपय अस्पतालमा बेड अभाव समेत हुन थालेका छन् । कोरोना यसरीनै बढ्दै जानेहो भने अवस्था निकै स‌ंकटपूर्ण हुन सक्ने भएकाले सचेत रहन स्वास्थ्यबीदहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् ।
त्यस्तै चिकित्सकहरुले पनी गम्भीर अवस्थामा बाहेक कोरोना संक्रमितले घरमै बसेर पनि कोरोनालाई पराजित गर्न सक्ने बताएका छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर अनुप बास्तोलाले लक्षण नभएका तर पीसीआर पोजेटिभ भएका व्यक्तिहरुले ९ दिन घरमै आइसोलेसनमा बसे पुग्ने बताए ।
यसबाहेक सामान्य ज्वरो आउने, अलिअलि टाउको दुख्ने र सामान्य पखाला लाग्ने लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुले पनि डराउन नपर्ने डा. बास्तोलाले बताए । यस्ता लक्षण भएका व्यक्तिहरुले चिकित्सकको परामर्शमा घरमै औषधि सेवन गरेर कोरोना पराजित गर्न सक्ने उनले बताए ।
तर यदि कोरोना संक्रमित भएको पाँचौ देखि छैठौँ, सातौँ दिनसम्म पनि ज्वरो कम नहुने बरु निरन्तर बढ्ने, खोकी लागिरहने तथा टाउको अत्यधिक दुख्ने र छाती पनि दुख्ने समस्या भएमा भने निमोनियाले गाँज्न सक्ने खतरा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भने तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्ने डा. बास्तोलाको भनाई छ ।
अहिले घरमै रहेका संक्रमितहरुमा मानसिक समस्या उत्पन्न हुन थालेकोमा पनि चिकित्सकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मानसिक समस्याबाट दूर रहन सामाजिक सञ्जालमा देखिने कोरोना सम्बन्धीका नकारात्मक समाचार तथा तस्बिरहरुबाट आफूलाई टाढा राख्न डाक्टरहरुको सुझाव छ । डा. बास्तोलाले घरमै बसिरहेका संक्रमितहरुले सामाजिक सञ्जाल हेरेर तर्सिने काम गर्न नहुने सुझाव दिए । उनले दृघरोगीहरुको विशेष ख्याल राख्न पनि सुझाव दिए ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले पनि कोरोना सम्बन्धीका नकारात्मक समाचारहरुबाट आफूलाई प्रभावित पार्न नहुने बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा आउने भयावह ढंगका समाचारहरुले बिरामीको मनोबल घट्ने भएकाले यस्ता गतिविधिबाट सकेसम्म टाढै रहन सुझाव दिए ।
डा. पुनले घरमै बसेका संक्रमितहरुले आफ्नो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कति छ भनेर निरन्तर थाहा पाइरहन अति आवश्यक रहेको बताए। अक्सिजनको मात्रा थाहा पाउन खल्तीमै बोकेर हिँड्न सकिने पल्स अक्सिमिटरको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अहिले सबै परिवारले कम्तीमा एउटा अक्सिमिटरको जोहो गर्न आवश्यक रहेको डा. पुनले बताए। अक्सिजन लेभल ९२ भन्दा कम भएमा चिकित्सकसँग परामर्र्श लिनुपर्ने उनले बताए । अक्सिजनको मात्रा कम भएपछि ओठ निलो हुने, स्वास फेर्न गाह्रो हुने लगायतका लक्षणहरु देखिने गरेका डा. पुनले बताए ।